13/04/2018 - Page 2 sur 3 -
Ampefiloha : Nitolo-tena ilay lehilahy nandratra mpianatra
13/04/2018 admintriatra 0
Tsy niandry taratasy fampiantsoana fa nitolo-tena avy hatrany teny amin’ny biraon’ny polisy teny amin’ny boroborintany fahatelo ilay rangahy nitondra basy, nandratra mpianatra tao anaty taksibe teny Ampefiloha ny talata maraina lasa teo. Niaiky ny heloka …Tohiny
Aretina Hémophilie : Ireo zazalahy kely no tena voany
Ny “Hémophilie” dia aretina tsy fahampian’ny singa ao anaty ra, ka tsy afaka mivaingana. Aretina tsy fantatra mazava nefa iainana mandra-pahafaty. Ireo zazalahy kely no fantatra fa tena voan’izy io, ary amin’ny fotoana hanaovana ny …Tohiny
Anosibe : Mpangalatra môtô nosavoritahan’ny olona
Enin-dahy tra-tehaka teo am-pangalarana môtô no nosavoritahan’ny andian’olona rehefa nifanenjehana hatreny Anosibe, ny harivan’ny talata 10 Aprily lasa teo. Mbola tsy mety fongana amin’izao fotoana ity halatra môtô ity raha ny eto an-drenivohitra manokana no …Tohiny
Fandraisana an-tanana ireo adala mirenireny : Mialangalana avokoa ireo tompon’andraikitra
Mitombo isa hatrany ireo olona adala mirenireny eto an-drenivohitra sy ny manodidina tato ho ato. Raha tsy misy ny fandraisana an-tanana haingana azy ireny anefa dia loza mitatao ho an’ny fiarahamonina, toa ny niseho teny …Tohiny
Efa loza mihatra eto amin’ny firenena ankehitriny ny fipariahan’ny aretina Pesta. Ny mifanohitra amin’izany anefa no fahitan’ireo tompon’andraiki-panjakana azy. Toa miraviravy tanana mantsy ny praminisitra Ntsay Christian, sy ireo governemanta tarihiny, fa tsy misy fandraisana ...Tohiny
Minisiteran’ny Serasera : « Efa rava…, tsy misy intsony izany MBS izany »